I-Inshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo | uAirbnb
UKUKHUSELA UMBUKI ZINDWENDWE
I-inshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo
Xa kuvela imeko engaqhelekanga yokwenzakala komntu okanye ukonakala kwento yakhe ngoxa ehlala kwindawo yakho ekhuselwe yi-inshorensi, usenokubhatalwa ukuya kufikelela kwi$1 000 000 yeedola zaseMerika.
Ifumaneka kubabuki zindwendwe emhlabeni wonke*
Sikhusela ababuki zindwendwe ukususela ekubhaliseleni ukufika ukuya kutsho kwixesha lokuphuma
Ayikho efana nayo kwishishini lokuhamba
*Ayisebenzi kubabuki zindwendwe abanikela ngeendawo zokuhlala ngoAirbnb Travel LLC, ababuki zindwendwe abakwimimandla yaseTshayina, ababuki zindwendwe abaseJapan, okanye ababuki zindwendwe bezinto ezinokonwatyelwa.
I-inshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo ikhusela:
Imbopheleleko yakho ngokwasemthethweni yokwenzakala kweendwendwe okanye kwabanye abantu -Imbopheleleko yakho ngokwasemthethweni yomonakalo wezinto zeendwendwe okanye zabanye abantu -Imbopheleleko yakho ngokwasemthethweni yomonakalo owenziwe ziindwendwe okanye ngomnye umntu kwiindawo ezisetyenziswa ngumntu wonke njengeendawo zokwamkela iindwendwe kwizakhiwo nezindlu eziselumelwaneni
I-inshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo ayikukhuseli oku:
Umonakalo okanye ukwenzakala okubangelwe yinto eyenziwe ngabom (okungeyongozi)
Ukuphulukana nomvuzo -Umonakalo kwindawo yakho okanye kwizinto zakho (ezo zinokukhuselwa [Sisiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo] (/isiqinisekiso)*)
*Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo sakwa-Airbnb asinanto yakwenza neInshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo okanye iAirbnb UK Services Limited.
Sizimisele ukwenza intsapho ekhuselekileyo nenokuthenjwa ehlabathini lonke.
Ekubeni ndakhe ndalundwendwe ngaphambili, bendingaxhalabi kakhulu xa kuza kuhlala umntu ekhayeni lam. Bendisazi ukuba indawo yam ineinshorensi ... ibe
bendisazi ukuba iindwendwe ziza kuba nembeko.”
u-Uslan, umbuki zindwendwe eLondon
1. Ifomu yokufaka ibango igqityiwe
Xa umbuki zindwendwe, undwendwe okanye omnye umntu eqhakamshelana Nabaxhasi Bentsapho, uAirbnb uza kunikezela ngenkcazelo yendlela elifakwa ngayo ibango.
2. Inkampani yeinshorensi imisela umntu oza kuphanda ibango, aze yena ahlole elo bango
Emva kokuba ifomu yokufaka ibango igqityiwe, umntu ophanda ibango omiselwe yinkampani yeinshorensi uza kuqhakamshelana nawe ukuze nincokole ngebango aze aqokelele nenkcazelo efunekayo.
3. Ibango liyaphandwa
Umntu ophanda ngamabango uza kubhatala ibango ngokwemimiselo Yeinshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo kunye nemithetho esebenzayo kulo ndawo.
Gcwalisa Ifomu Yenkqubo Yokufaka Ibango Kwi-inshorensi
I-inshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo isebenza phantsi kweemeko ezithile, inemilinganiselo neemeko engazibhataleliyo. Ukuze ufunde ngakumbi, dawunlowuda ushwankathelo lwenkqubo oluneenkcukacha ezingakumbi.
Ngaba kukho into ekufuneka ndiyenze ukuze ndikhuselwe phantsi kweInshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo?
Hayi. Ngokuvuma ukufaka indlu kuAirbnb okanye ngokuqhubeka ubenendlu ekuAirbnb, ababuki zindwendwe* bayavuma ukukhuselwa yi-Inshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo xa kusenzeka into ngexesha ekuhlelwe ngalo kwindawo ka-Airbnb. Qaphela ukuba i-Inshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo isebenza phantsi kwemimiselo, imiqathango neemeko ezingabhatalelwayo zepolisi.
Ababuki zindwendwe abafuna ukuphuma kwinkqubo yeInshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo, kufuneka benze ezi zinto zilandelayo:
Sithumelele i-imeyile ngedilesi yeimeyile ekwiakhawunti yakho yombuki zindwendwe
Faka igama lakho nefani kunye nenombolo yefowuni ekwiakhawunti yakho yombuki zindwendwe
Faka isihloko sendlu yakho njengokuba sinjalo
Nceda uphawule ukuba idilesi ye-imeyile yokuphuma kwi-inshorensi ayijongelwa enye into ngaphandle kwezicelo zokuphuma kwi-inshorensi.
*Ayisebenzi kubabuki zindwendwe abanikela ngeendawo zokuhlala ngoAirbnb Travel, LLC, ababuki zindwendwe abakwimimandla yaseTshayina, ababuki ziindwendwe baseJapan, kunye nababuki zindwendwe bezinto ezinokonwatyelwa.
Eminye Imibuzo Edla Ngokubuzwa
Yintoni I-inshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo?
Yintoni umahluko phakathi kweSiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo sakwa-Airbnb kunye neInshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo?
I-inshorensi yomnikazi wendawo isebenza njani neInshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo neSiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo sakwa-Airbnb?
Yintoni i-inshorensi Yokuzonwabisa?
Funda okungakumbi ngokukhusela umnikazi wendawo
Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo Sika-Airbnb
I-inshorensi yomonakalo yababuki zindwendwe beendawo efikelela kwi$1 000 000 yeedola zaseMerika.
I-inshorensi yokuzikhusela yababuki zindwendwe bezinto ezinokonwatyelwa efikelela kwi$1 000 000 yeedola zaseMerika.